Wararka - Huangyan Yjie wuxuu u diray 352,700 yuan ardayda saboolka ah
Huangyan Yjie wuxuu u diray 352,700 yuan ardayda saboolka ah
Dhawaan, Huangyan YJIE Plastics Co., Ltd waxay abaabushay Shaqaalaha si ay u fuliyaan howlaha gargaarka ardeyda dayrta dahabiga ah ee 2020. Ku dhowaad 50 mutadawiciin ah oo ka socda Shirkadda ayaa tagay dugsiga waxayna u direen deeqo iyo agabka iskuulka 242 ardayda saboolka ah ee degmada. Wadarta deeqaha waxay ahaayeen 352,700 yuan.
“Deeqahaani waxay ka yimaadeen shakhsiyaadka daneeya bulshada iyo shirkadaha daryeelka ee kafaala qaada ardayda mid-mid-labo. Shirkaddu waxay ku darsataa deeqaha 'Sanduuqa Gargaarka Ardayda' Weifeng 'hirgelinta iyo maaraynta, waxayna hirgelisaa lacag gaar ah oo ujeeddooyin gaar ah leh. Caawimaad loo fidiyaa carruurta ay dhib ku tahay inay aadaan dugsiga, ”
] Haddii ay dhacdo, Shaqaaluhu kaliya si taxaddar leh uma qabtaan shaqada ka hor inta aan la soo saarin deeqaha, laakiin sidoo kale waxay ku dhiirrigelinayaan dadka qaata inay u mahadceliyaan oo ay ku guuleystaan ​​waxbarashadooda, oo ay noqdaan dad wanaagsan.
Xirxirida Dhalada Khamriga, Balaastikada caaga ah, Dhalooyinka Cuntada Fasalka ah, Barware Set, Xayeysiinta Barware, Barware aan la jabin karin,